आज बढ्यो डलरको भाउ, हेर्नु`होस कुन देशको कति पुग्यो ?
July 20, 2021 1041
नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमे`रिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर भन्ने बुझन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारो`बारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
विनिमय दर भन्नाले एउ`टा मुद्राको अर्को मुद्रामा विनियम गर्दा प्रयोग हुने दरलाई बुझाउँदछ । दुई मुद्रा विचको यस्तो दर हो जस अनुसार एक मुद्रा अर्कोमा साट्ने गरिन्छ अर्थात एउटा मुद्रा`लाई अर्को मुद्रामा साट्नको लागी प्रयोग गरिने दरलाई विनिमय दर भनिन्छ ।
उदाहरणको लागी नेपालमा अ`मेरिक डलको विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालमा विदे`शी मुद्राको विनिमय दरको निर्धा`रण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “ नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगल`बारका लागि विदेशी मु`द्राको विनिमय दर तोकेको छ । तोकेको विनि`मय दर अनुसार आज अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ ।
आज अमेरि`की डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ । बेला|यती पाउण्ड एकको खरि|ददर १६३ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १६४ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी युरो एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्री|दर १४१ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको राष्ट्र बैं`कले जनाएको छ । कुन देशको मु`द्राको दर कति ?
Prevसाउदीमा अस्प`तालको बेडमा रहेका बुबालाई छोरी बिनिताको प्रश्न: मम्मीले झै अर्को बिहे त गर्नुहुन्न ?
Nextकवाडी उठाउनेले एकै पटक ३ वटा हेलिकप्टर ल्याए`पछि फोटो खिचाउनेको लाग्यो भिड
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132967)